दक्षिण अफ्रिकी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नेताः क्रिस हनी - Left Review Online
सन्दर्भः क. क्रिस हनीको २७औँ स्मृति दिवस
अफ्रिकी राष्ट्रिय काँग्रेसका नेता नेल्सन मण्डेलापछि सबैभन्दा लोकप्रिय नेता तथा दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव समेत रहेका क्रिस हनीको साम्राज्यवादीहरुसँको मिलोमतोमा दक्षिणपन्थीहरुले गोली हानी हत्या गरेका थिए ।
को हुन् क्रिस हनी ?
क्रिस हनी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका एक महान् क्रान्तिकारी र अन्तर्राष्ट्रयवादी नेता हुन् । अफ्रिकी समाजवादी र मुक्तिकामीहरुका त उनी अझ लोकप्रिय नेता हुन् ।
उनी कंगोका क्रान्तिकारी प्याट्रिस लुमुम्बा, घानाका क्रान्तिकारी क्वामे एनक्रुमा र ब्रुकिना फासोका नेता थोमस संकारा जस्तै अफ्रिकाको स्वतन्त्रता, मुक्ति र समाजवादी आन्दोलनको एक अग्रणी नाम हुन् । संघर्ष, संगठन, सामान्य जीवनशैली, क्रान्तिकारिता र जनता बिचको सम्बन्ध उनबाट हरेक क्रान्तिकारीले सिक्नुपर्ने पाठ हुन् ।
हनी अफ्रिकी राष्ट्रिय काँग्रेस (एएनसी) र दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टीको (एसएसीपी) सबैभन्दा राम्रा वक्ता थिए । क्रान्तिकारी, स्पष्ट र कुशल वक्ता । उनलाई एक समझदार र समन्वयकारीको रुपमा पनि लिइन्छ जसले एएनसी र एसएसीपी बिचको समन्वय र क्रान्तिकारी भावनामा कहिले आँच आउन दिएनन् ।
उनकै नाम र हत्याको विरोधको बलमा एएनसीले सन् १९९४ मा चुनाव जित्यो र नेल्सन मण्डेलाले सरकार चलाए । मण्डेलाका अनुसार हनी दक्षिण अफ्रिकाको मुक्ति आन्दोलनको सबैभन्दा सर्वोच्च नाम हो ।
२८ जुन १९४२ दक्षिण अफ्रिकाको दक्षिणपूर्वी क्षेत्र ट्रान्सकाईको एक दुर्गम सानो गाँउ कोफिम्भाडामा जन्मिएका क्रिस हनी (मार्टिन थेम्बिसिली हनी) को १० अप्रिल १९९३ मा हत्या गरिएको थियो ।
हत्याअघि दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव रहेका उनी अफ्रिकी राष्ट्रिय काँग्रेसको प्रमुख नेताहरुमध्ये एक थिए । नेल्सन मण्डेलाले स्थापना गरेको अफ्रिकी राष्ट्रिय काँग्रेसको भातृ संगठन युवा लिगबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका क्रिस हनी १५ वर्षको उमेरमै अफ्रिकी राष्ट्रिय काँग्रेसको सदस्य बनेका थिए । लगत्तै उनी अफ्रिकी राष्ट्रिय काँग्रेसको सशस्त्र संगठन वा जनसेनामा सक्रिय भए र त्यसको उपप्रमुख समेत रहे ।
क्रिस हनीका बाबुको नाम गिल्बर्ट हनी र आमाको नाम मेरी हनी थियो । उनी ६ मध्ये बाँचेका ३ भाइ छोरामा माइला थिए । उनका पिता अफ्रिकी राष्ट्रिय काँग्रेसको कार्यकर्ता थिए ।
सानैदेखि अध्ययनमा निकै तेज हनी पूर्वी केपमा स्नातक पढ्दै गर्दा गोराहरुबाट कालाहरुमाथि भएको शोषण र विभेदको विरुद्धको विरोध तथा वान्टु शैक्षिक ऐनको विरुद्धमा प्रदर्शनमा सहभागी भए । स्नातकपछि उनले सन् १९६२ मा अफ्रिकी राष्ट्रिय काँग्रेसको सशस्त्र संगठन एमके (जनसेना) मा भर्ती भए । सशस्त्र संघर्षकै सुरुवातमा उनले प्रशासनबाट बच्न आफूलाई क्रिसको रुपमा चिनाए ।
सुरुवाती राजनीतिक जीवन
दक्षिण अफ्रिकी जनताको अधिकार, समानता र न्याय, राष्ट्रिय मुक्ति र स्वाधीनताको वकालत गर्ने उद्देश्यले अफ्रिकी राष्ट्रिय काँग्रेसको स्थापना भएको थियो । सन् १९४८ पछि यो रंगभेदविरोधी आन्दोलनको अगुवा बन्यो । यसलाई नेल्सन मण्डेला लगायतका नेताले रंगभेदविरोधी आन्दोलनको पर्यायको रुपमा चिनाए ।
अफ्रिकी राष्ट्रिय काँग्रेस (एएनसी) एक ऐतिहासिक गठबन्धन हो, जसमा रंगभेद विरोधी र राष्ट्रिय मुक्तिकामी जनताका साथै दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टी (एसएसीपी) र दक्षिण अफ्रिका ट्रेड युनियन काँग्रेस (कोसाटु) सामेल छन् । यसलाई तीन पार्टीको सम्मिलन मानिन्छ, जहाँ अन्य दुवैले विगतमा पनि भिन्न रुपमा चुनावमा समेत भाग लिएका छैनन् ।
यही वर्णभेद र असमानताको परिस्थितिबाट हनीको परिवर्तनकारी सोचको उदय भयो । हनी १५ वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । क्रिस हनीले अफ्रिका राष्ट्रिय काँग्रेसको सशस्त्र जनसेनाको संगठन, प्रशिक्षण र तालिमको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
उनी निकै सुझबुझ भएका सबै सहयोद्धाको मन बुझ्नसक्ने क्रान्तिकारी र अनुशासित थिए । उनको नेतृत्व जनसेना बिच लोकप्रिय हुँदै गयो भने विलासी बन्दै गएका र क्रान्तिकारी युवाको भावना बुझ्न नसक्ने नेताहरुको आलोचना बढ्दै गयो । त्यसैले सन् १९६९ मा क्रिस हनी सहित ६ जनाले नेतृत्वलाई ‘हनी प्रस्ताव’ भनिने ज्ञापनपत्र तयार गरी पेश गरे ।
समाजवाद र अन्तर्राष्ट्रवादको यात्राः
हनीले लामो समय निर्वासनमा विताए । उनी सुरुमै लेसोथोमा तालिम गर्न गए । त्यसपछि उनी तत्कालीन सोभियत संघमा सशस्त्र युद्धको तालिम लिन पुगे । त्यहाँ उनले एक वर्ष बिताए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि हुनुपर्छ, त्यतिबेला सोभियत संघ र क्युवाको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनप्रतिको सहयोग र सद्भाव निकै बलियो थियो ।
क. क्रिस हनी, अफ्रिकी राष्ट्रिय काँग्रेसको सैन्य दस्ता एमकेका चिफ अफ स्टाफको रूपमा
अंगोलामा स्वयम् चे ग्वेभाराले गुरिल्ला संघर्ष चलाएका थिए । हनी पनि जिम्बाब्बे, लेसोथो, जाम्बिया, अंगोला आदि देशमा निर्वासनमा मात्र बसेनन्, त्यहाँको क्रान्तिकारी आन्दोलनसँग जोडिएर रहे । उनी अन्तर्राष्ट्रवादी पनि थिए । उनले युरोपमा करिव १० महिना तालिममा बिताए । उनी भियतनाम समेत आई सशस्त्र संघर्षको बारेमा बुझेर गए ।
मण्डेला र क्रिसको सम्बन्ध
मण्डेलालाई दक्षिणपन्थीहरु कम्युनिस्ट र उग्रपन्थी ठान्दछन् तर कम्युनिस्टहरु र वामपन्थीहरुले उनले रंगभेदको मुद्दालाई लिएर सरकारसँग सम्झौता गरेको र समाजवादी आन्दोलनलाई धोका दिएको ठान्दछन् । यी दुवै सत्य होइनन्‌ ।
लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको प्रतीकको रुपमा मण्डेला चिनिए भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट, सच्चा समाजवादी र अन्तर्राष्ट्रयवादीको रुपमा क्रिस हनी चिनिए । उनी आफ्नो जीवनभर मण्डेला जत्तिकै लोकप्रिय थिए ।
दक्षिण अफ्रिकी शान्ति सम्झौता र सशस्त्र मुक्ति आन्दोलनको शान्तिपूर्ण अवतरणका कारण मण्डेला अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिचित भए । तर जब मण्डेला जेलमा थिए, क्रिस हनी र बिनी मण्डेलाले आन्दोलन हाँकेका थिए ।
बिनी मण्डेला एक महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकारी थिइन् । श्रीमतिको रुपमा मण्डेलाको विश्वासपात्र र क्रिस हनीसँगको विश्वासको सम्बन्धका कारण उनी महिला आन्दोलनको मात्र होइन, अफ्रिकी काँग्रेसको पनि सशक्त नेता बनिन् । जीवनभर नेल्सन मण्डेला र क्रिस हनी बिच अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध भएपनि कतिपयले बिनी मण्डेला र क्रिस हनीको सम्बन्धलाई लिएर दरार सृजना गर्न खोजे । रोध विश्वविद्यालयबाट स्नातक उनलाई धेरैले तन्नेरी मण्डेला भनी चिन्दथे । तर आजकल यसोभन्दा कतिपय उनका समर्थक उनको अपमान भएको पनि ठान्दछन् ।
हत्या र विश्वव्यापी अर्थराजनीतिक सन्दर्भ
सन् १९९० को सुरुवातमा विश्वमा साम्राज्यवादी र पुँजीवादीहरुले एक नयाँ युगको सुरुवातको घोषणा गरे । सोभियत संघको विघटनसँगै विश्वमा समाजवादमाथि पुँजीवाद हावी भएको होहल्ला गरे । तर समाजवादको पतनको घोषणा गर्दागर्दै उनीहरुमाथि केही धक्काहरु देखिन थाले ।
सन् १९९० मै दक्षिण अफ्रिका र नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो । अनि दुवै देशमा प्रमुख शक्तिको रुपमा कम्युनिस्टहरुको उदय भयो । कम्युनिस्ट पार्टी बलियो हुनुमा तिनहरुको समय सापेक्ष विचार र अत्यन्त कुशल रणनैतिक र कार्यनैतिक क्षमता भएका श्रमजीवी वर्गका नेताहरुको नेतृत्व प्रमुख रहेको थिए । नेपालमा जननेता क. मदन भण्डारीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उचाइमा पुग्दै थियो भने दक्षिण अफ्रिकामा जननेता क. क्रिस हनीको नेतृत्वमा आन्दोलनले उचाइ लिइसकेको थियो ।
सन् १९९० देखि नै साम्राज्यवादीहरु यसको आँकलन गरेका थिए कि यी जनप्रिय नेताहरु उनीहरुका लागि खतरा हुनेछन् । केहीले पहिलेनै खतराको शंका गरेका थिए ।
पुँजीवादी र साम्राज्यवादीहरुलाई थाहा थियो कि ती नेताहरुकोपछि लाखौँ जनताको साथ र समर्थन छ । त्यसैले उनीहरु ती नेतालाई हत्या त गर्न चाहन्थे तर त्यो हत्या नभई एक दुर्घटना बनोस् या सामान्य मृत्यु । उनीहरु कम्युनिस्ट आन्दोलन र विचारलाई समेत कमजोर बनाउन चाहन्थे ।
अनि केही समयपछि दुश्मनहरु सन् १९९३ को अप्रिल र मे महिनामा क्रमशः क्रिस हनी र मदन भण्डारीको हत्या गर्न सफल भए । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई दासढुंगामा जीप दुर्घटना गराई मारियो ।
दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टी र राजनीतिका सबैभन्दा लोकप्रिय र क्रान्तिकारी क्रिस हनीलाई उनकै निवास बाहिर गोली प्रहार गरी हत्या गरियो । हनीलाई एक अतिवादी जानुज वालुसले गोली हानेको थियो, जसका लागि सुरुमा मृत्युडण्डको फैसला सुनाइए पनि पछि २०१६ मा अदालतबाट गल्तिका लागि पश्चाताप गर्ने, हनीका परिवारसँग माफी माग्ने र आइन्दा कसैको हत्या नगर्ने शर्तमा रिहा गरिएको थियो ।
सन् १९९१ फेब्रुअरीमा उनले आफ्नो अत्मकथा प्रकाशन गरेका थिए, जसमा उनले आफ्नो बाल्यकाल र शिक्षादेखि राजनीतिक जीवनसम्मका अनेकन पाटाको व्याख्या गरेका थिए । ६ जना सन्तानमध्येका पाँचौ उनी दुर्गम र असचेत समाजको सम्झना गर्दै सानैमा तीन भाइबहिनीको मृत्यु भएको बताउँछन् ।
उनको सानैदेखिको जीवन संघर्षपूर्ण रहेको, सन् १९५६ को अभियानबाट उनी एएनसीमा आबद्ध भएको र उनी दक्षिण अमेरिकी र अंग्रजी साहित्य पढ्दै गर्दा मार्क्सवादी अध्ययनमा लागेको लेखेका छन् ।
उनी सम्झन्छन्, “सन् १९६१ मा भूमिगत दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेपछि बल्ल उनलाई महशुस भयो की स्वाधीनता र मुक्तिका लागि कम्युनिस्ट पार्टी नै आवश्यक छ । त्यतिबेला गोभान बेकी, वारम फिसर, रे सिमोन, मोस कोटाने आदि पार्टीका प्रभावशाली व्यक्ति थिए ।
सन् १९६२ मा एमकेमा भर्ती भएपछि उनी १९६७ मा जिप्रा जस्तामा सामेल भई जिम्बाब्बेमा संघर्ष गरे । उनी १९७४ मा लेसोथोमा बसी दक्षिण अफ्रिकामा भूमिगत संघर्ष सञ्चालन गरे ।
हनी सन् १९६२ मा सरकार विरोधी प्रचाहरु बाँड्ने क्रममा कम्युनिस्ट विरोधी कानुनका कारण पक्राउ परे । तर जमानीमा छुटेपछि उनी बोत्स्वाना पुगे । त्यहीँ उनले अफ्रिकी काँग्रेसको सदस्य बने । फेरि १९६७ मा उनी २ वर्षका लागि जेल चलान भए ।
क्रिस हनीको नाममा लेक्चर नाट्यघर बनेको छ । उनको सम्मान र सम्झनामा केप टाउन विश्वविद्यालय दक्षिण अफ्रिकाले लेक्चर नाट्यघरको नामाकरण उनको नामबाट गरिएको छ । त्यहाँ उनको बारेमा समेत अध्यापन र प्रवचन गरी जानकारी गराइन्छ ।
(लेखक मदन भण्डारी एसियाली विद्यालयका संयोजक हुनुहुन्छ।)
पछिल्लाे - कमरेड हेलेन बोलेकको सम्झनामा
अघिल्लाे - कोरोनाले सिकाएको पाठ र विश्व राज्यव्यवस्था